Home » Creative Writing » မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှု-ဇာတ်သိမ်း
View all posts by La Yeik →
happy ending ကြီးအတင်းလုပ်ထားသလိုပဲ…။
သမ္မတလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့.. ၅နှစ်ကျအပြီး.. ထောင်ကအထွက်မှာ.. ၂လသားကလေးချီထားတဲ့.. မိန်းမကလာကြိုတာတို့.. ဘာတို့နဲ့.. ဇတ်သိမ်းကြည့်ပါလား..။
အို….သဂျီးကလည်း ၅နှစ်ကြာမှ ထွက်လာတာကို ဘယ်က ၂လသားတုန်း…
ပီးတော့ မိန်းမတွေကြမ်းရင် ယောကျာ်းတွေ အငယ်နောက်ပါသွားတာများတယ်လို့ ပြောတာ
ဆရာမ မစနာ​ရေးထားတဲ့ ဝတ်​ထုတို တပုဒ်​လည်း အရမ်း​ကောင်းတယ်​။ ​ဖောက်​ပြားလုလု ​ယောက်​ကျားကို ပြန်​ထိန်းပုံ​လေးကို ​ရေးထားတာပဲ။ ​မမှီက မစနာဆို အသည်းစွဲပဲ။ ​ကောင်းပါတယ်​ ညီမ​လေး​ရေ။
ဟုတ်တယ် မမှီရေ…မိန်းမဖြစ်ရတာလည်း တယ်မလွယ်လှပါဘူး….ခုခေတ် အိမ်ထောင်ရှင်မတွေဆို ပိုဆိုးပေါ့
တစ်ထောင်တန် ၂ အုပ် မတတ်နိူင်တဲ့ မိန်းမမျိုး ဆိုရင်ကော ?
ခြေငြိမ်သွားတာက ကိုယ့်ကြောင့်လား ဟိုတစ်ယောက်နဲ့ ပြတ်သွားလို့လား ၊
တထောင်တန်နှစ်အုပ်မက ကိုင်နိုင်တဲ့ သူတွေရဲ့ ယောကျာ်းအများစုပဲ အဲဒလို ဖြစ်ကြသလားလို့…..ပိုက်ဆံအတွက်ကြောင့် မဟုတ်ရပါ ကိုကို ကို့ပဲ ချစ်လို့ပါ ဆိုတာကိုတော့ မပြောတက်တော့ပါဘူး အူးတောင်ပေါ်သားရယ်….အော် အခြစ် အခြစ်
ငွေမကုန်ပဲ ယောင်္ကျားထိန်းနည်းရှိသဗျှ ၊
အဲ့နည်း လိုချင်ရင် အလကားတော့ ရဘူးနော့ ၊
ဒီ ဗျူဟာတွေကို ခံနိုင်ဖို့
ပြောကို ပြောချင်တော့ဘူး ဒီလူဂျီးတွေဂို..ဂယ်ပဲ
ပြောပြိုက် ညလေး…မြန်မာပြေက မိန်းမတွေဘွ ဘယ်လောက်စိတ်နာစရာကောင်းဒယ်ဆိုတာ….
ဟုတ်ကဲ့ ရှိမှာပါ အူးဆာ….အူးဆာရဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး လည်း စောင့်မျှော်လျှက် ရှိကြောင်းပါရှန့်….
♫♪♫ဆံပင်သစ်ကလေးနဲ့ လင်ချစ်ဆေးဖေါ်♪♫♪အို..ဟို..ဟိုဟို ..အိုမီဂါ…♫♪♫
ဆြာမိုက်… ရှေ့နောက်လွဲနေပြီ… စံရှားတင်ဂျီး ဆိုတာက…
. အနေနီးတာတခုထဲနဲ့တော့မဆိုင်ပါကြောင်း…. ပထမပိုင်းကတဲကမန့်ချင်နေတာရယ်…
မတိဘာဝူး ထောင်ကျသွားပလားလို့ ခိခိ
လွန်ပီးကာမှသိတယ် ပြန်ထိမ်းမရဒေါ့ဝူးဆိုရင်ရော ဘိုလုပ်မလဲ ????
ဘာမန့်ရမှန်းကို မသိဘူး.. ဦးဆာ ပြောတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေလဲ ရှိ… လရိပ်ပြောတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေလဲ မရိုးတမ်းကြားနေရပါသေးတယ်…
လူအမျိုးမျိး စိတ်အထွေထွေပေါ့ အူးလေးရယ်….ဒါက ပြဋ္ဌာန်းချက်မဟုတ်ရပါ….ဖြစ်တက်တဲ့ သဘာဝပါ…
အသက်ဒွေလဲ ကြီးပါဘီ အူးလေးရယ်…စိတ်လျှော့…င်င်
ိမိန်းမက အခြားဘာအပြစ်မှမရှိပဲ အလှပြင်လိုက်မှ ယောင်္ကျားက
ဆိုလိုချင်တာက ဂလိုဘာ အူးလေးရယ်…ယောကျာ်းက ပွဲတက်မယားအဖြစ် ပွဲထုတ်ချင် မိန်းမက လူတောမတိုးချင်နဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိဖြစ်နေချိန်မှာ ယောကျာ်းဖြစ်သူက သူဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကို တခြားသော မ်ိန်းမ ကို သူ့မိန်းမနေရာမှာ အစားထိုးကြည့်တာပါ…တကယ်ချစ်တာကတော့ ကိုယ့်အိမ်က ချစ်မြတ်နိုးလို့ တရားဝင်ယူထားတဲ့မိန်းမပေါ့…ဒါကို မိန်းမအကြီးဖြစ်သူက ကိုယ့်အားနည်းချက်ကိုပြင်ပြီး
အလှ ပြင်လွန်းတဲ့ မိန်းမတွေကို ကြည့်မရဘူး ။
ဟုတ်တယ် အူးသူရ…အလှပြင်လွန်းရင်လည်းမကောင်းသလို မပြင်ပြန်ရင်လည်း ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ အလှပါ ပျောက်နေတက်တယ်…ဖွေးဖွေးကတော့ နဂိုလှကိုး အူးသူရရဲ့……
ကယ်တော်မူပါ မြတ်စွာဖျား…ဂယ်ဂျီးလား အန်ကယ်ဂျီးရေ….ဆုတောင်းကောင်းတယ် ပြောရမား
မြရိပ်ညိုမှာ လရိပ်ခို ချဉ်လိုက်တာ… တူတူသွားကဲဂျဇို့..
ဖတ်ပြီးတာကြာပြီ.ဖုန်းနဲ့က မန့်ရတာ အဆင်မပြေလို့..
အဟုတ်ပဲ.. ယောက်ျားတွေများ တယ်အလှကြိုက်တာ… အခုခေတ်ဆို ပိုဆိုးသေး.. ကိုရီးယားကားတွေကြည့်ပြီး အိုးဆားဗစ်ကျားတွေကမှ ချိန်နေတဲ့ မိန်းမတွေက ရှိသေး… မျက်နှာပြောင်တိုက်ဖို့လည်း ဝန်မလေးဘူး.. သူများလင်ကိုလုလို့ ရှက်ရကောင်းမှန်းလည်း မသိဘူး…
အိမ်က မိန်းမတွေဘဝများ သနားစရာ… အိမ်တွင်းအောင်းနေပြန်လည်း မဖြစ်.. အပြင်ထွက်ပြီး ပိုက်ဆံအတူတူရှာပြန်ရင်လည်း အချိန်မပေးလို့ဆိုပြီး တစ်ပြစ်.. တန်းတူလိုက်ညှိရင်တောင် သူတို့ကို တန်းတစ်ခုပေးထားပြီး ကိုယ်က နောက်က နေရပြန်ရော.. သူတို့ထက် ဆရာလုပ်တဲ့ မိန်းမမဖြစ်အောင်လည်း ဂရုစိုက်ရသေး..
အာ့ပြောဒါပေါ့ မွန်မွန်ရယ်….အလှမကြိုက်တဲ့ယောကျာ်းဆိုတာ မရှိသလောက် ရှားပါတယ်…